Waajibka Tallaalka Federaalka Hadda waxaa joojisay Maxkamadda Racfaanka ee Mareykanka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Waajibka Tallaalka Federaalka Hadda waxaa joojisay Maxkamadda Racfaanka ee Mareykanka
Maxkamadda Racfaanka Mareykanka ee Kilinka Shanaad ayaa maanta soo saartay joogitaan ku meel gaar ah, iyadoo joojineysa maamulka Biden ee maamulka Biden ee talaalka federaalka ee loo shaqeeyayaasha leh in ka badan 100 shaqaale ah. Machadka Xorriyadda Koowaad wuxuu ka codsaday Wareegga Shanaad isagoo ka wakiil ah Shabakadda Telefishinka Daystar iyo Ururka Qoyska Mareykanka si ay dib ugu eegaan waajibaadka.
"Kuma noolayno kalitalisnimo uu madaxweynuhu soo saari karo amar oo uu la wareego dhammaan shirkadaha waaweyn ee qarankeena iyo nolosha in ka badan 84 milyan oo Maraykan ah," Kelly Shackelford, Madaxweynaha, Maamulaha Guud, iyo Madaxa La-taliyaha Koowaad Machadka Xorriyadda. "Xilka loo igmaday waa mid si weyn uga soo horjeeda dastuurka oo sidoo kale ku xad-gudbay sharciga sharciga ah. Waanu ku faraxsanahay in Kililka Shanaad uu joojiyo in la hirgeliyo.”
Maxkamaddu waxay tidhi, "Sababtoo ah codsiyadu waxay keenayaan in la rumaysto inay jiraan arrimo sharci oo culus iyo arrimo dastuuri ah oo ku saabsan Waajibaadka, Waajibku wuxuu halkan ku joogaa inta uu tallaabo kale ka qaadi doono maxkamaddan."
Shabakadda Telefishanka Daystar waa shabakad caalami ah, oo caqiido ku salaysan “waxay u go'day faafinta injiilka 24 saacadood maalintii, todobada maalmood ee usbuuca Urur kastaa waxa uu leeyahay in ka badan 100 shaqaale ah, taas oo ka dhigaysa in ay hoos yimaadaan waajibaadka tallaalka cusub.
Bishii Sebtembar, Madaxweyne Biden wuxuu faray Maamulka Badbaadada Shaqada iyo Caafimaadka ("OSHA") inuu ku dhawaaqo "heer ku meel gaar ah oo degdeg ah" (ETS) oo u baahan dhammaan ganacsiyada gaarka ah ee leh 100 ama in ka badan oo shaqaale ah si loo hubiyo in shaqaale kasta laga tallaalo COVID-19 fayraska ama soo bandhiga natiijada baaritaanka taban toddobaad kasta ama uu wajaho ganaaxyo suurtagal ah. Marka loo eego sharciga federaaliga ah, ETS waxa la soo saari karaa oo keliya marka sidaas la sameeyo "lagama maarmaan" si looga ilaaliyo shaqaalaha "khatar weyn" inay la kulmaan "walxaha ama wakiilada la go'aamiyey inay yihiin sun ama jir ahaan waxyeello ama khataro cusub." ETS waa ku meel gaar wuxuuna dhacayaa lix bilood ka dib, markaas ka dib wakaaladu waxaa looga baahan yahay inay soo saarto sharci joogto ah oo u hoggaansamaya nidaamka sharciyeed ee dheer.